Wasiir Mustaf Dhuxulow “Waa inaan dhalinyarada si buuxda u taageernaa si ay uga qeybgalaan siyaasadda iyo dimoqraadiyeynta Soomaaliya” – Radio Muqdisho
Wasiir Mustaf Dhuxulow “Waa inaan dhalinyarada si buuxda u taageernaa si ay uga qeybgalaan siyaasadda iyo dimoqraadiyeynta Soomaaliya”
Abu Dhabi, 09 December 2014 Siihayaha Wasiirka Warfaafinta Mudane Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ayaa maanta khudbad ka jeediyey shirka caalamiga ah ee Warbaahinta oo ka dhacay Abu Dhabi, kaas oo ay isagu yimaadeen khubarada Warbaahinta caalamka oo looga arinsanayey sidii loo diyaarin lahaa curin cusub oo ku wajahan la dagaallanka argagaxisada. waxaana mar uu ka hadlayey shirka uu yiri “Waa inaan dhalinyarada si buuxda u taageernaa si ay uga qeybgalaan siyaasadda iyo dimoqraadiyadda Soomaaliya.”
Siihayaha Wasiirka Warfaafinta ayaa intii uu joogey caasimadda Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa la kulmay Wasiir ku-xigeenka Arrimaha Dibedda ee dalka Imaaraadka Carabta Danjire Faris Al-Mazoui. Labada mas’uul ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal. Wasiir Mustafa ayaa mahadcelin gaar ah u jeediyey dowladda Imaaradka ee ku aadan sida ay taageero buuxda ula garabtaagan yihiin shacabka iyo dowladda Soomaaliya, isagoo intaa ku daray in Soomaaliya ay maanta ku tallaabsatay horumar ballaaran oo u baahan in si gaar ah loo sii taageero, si loo xasiliyo dalka.
Golaha Ammaanka Midowga Africa Oo Hawlgal Shaqo ku Tagaya Soomaaliya
Danjiraha Soomaaliya Ee Serbia Oo La Kulmay Wasiirka Arrimaha Gudaha Ee Dalkaas
Mudane Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow oo ka hadlayey shirka ayaa yiri “Waxaan aad ugu faraxsanahay muhiimadda gaarka ah ee la siiyey warbaahinta marka ay timaado in lala dagaalo xagjirnimada iyo argagaxisada. Warbaahinta waa muhiim waxeyna u baahan tahay in caalamku uu taageero warbaahinta Soomaaliya, oo horumar ballaaran ku tallaabsatay. Sababta aan Soomaaliya warbaainta aan xoooga u saareyno ayaa ah inaan ku guuleysano hanashada iyo kalsoonida shacabka oo muhiim u ah Soomaaliya. Waayo, marka ay shacabka aaminaan in dowladda ay wax u qabaneyso ayaan oran karnaa waan hanan karnaa kalsoonida shacabka.”
Wasiirka oo hadalkiisa wata ayaa yiri “Dal kaligiis lama dagaali karo fikirka xagjirnimada iyo argagaxisda, sabatuna waxey tahay in fikirku uusan laheyn xaduud. Soomaaliya waxaan xiriir wanaagsan la leenahay waddamada caalamka oo ay dani ugu jirto in Soomaaliya ay degto oo ay noqoto waddan dimoqraadiyadda ka hirgashay. Wasaaradda Warfaafinta ee Soomaaliya ayaa wax badan ka qabatay horumarka warbaahinta Soomaaliya oo waxaan xoojinay xiriirka iyo isfahamka hay’adaha dowladda dhexdooda, waxaan mudnaanta siinaa guulaha ciidamada Xooga Dalka Soomaaliya oo maalin walba guulo isdaba joog ah ka gaaraya la dagaalanka kooxaha argaxisada ah. Waxaan usbuuc walba soo saarnaa waxqabadka Dowladda oo ka hadlaya horumarka waxbarashada, caafimaadka, dhaqangelinta federaalka, nabadeynta iyo dib u heshiisiinta iyo horumarka dhanka amniga. Waxaana mararka qaarkood ka hadalnaa horumarka dhanka bulshada.”
Mudane Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ayaa hadalkiisa ku soo gabogabeeyey “Waan fahamsanahay ahmiyadda iyo muhiimadda dhalinyarada iyo sida loogu baahan yahay in wax loola qabto. Waa inaan shaqo u abuurnaa dhalinyarada, waana inaan xirfado shaqo barnaa iyo waxbarasho tayo leh. Waana inaan ku dhiiri gelinaa sidii ay uga qeybqaadan lahaayeen siyaasadda iyo dimoqraadiyeynta Dalka. Sidoo kale waxaan horumarinaa tayada warbaahinta gaarka loo leeyahay, waxaana dhiiri gelinaa bulshada rayidka iyo doorkooda ku aadan horumarinta dhalinyarada.”
Ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo tababar loogu soo xiray Degmada Tiyeegloow
Cisbitaalka Cadaado oo lagu soo kordhiyay qeyb cusub “SAWIRRO”
Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa si dhow ula socota heshiisyadii iyo qararadii laga gaaray arrimaha ciidamada Midowga Africa ee ku...
Danjire Maxamed Cabdullaahi Axmed ayaa maanta booqasho shaqo ku tagay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jamhuuriyadda Serbia. Danjiraha ayaa kulan wax ku...
Madaxda Wasaaradda Caafimaadka oo ka shiray howlaha hortebinta leh ee horyaalla Wasaaradda
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka Dr.Cabdinaasir Mukhtaar Ibraahim ayaa kulan ballaaran la yeeshay Agaasimayaasha Waaxaha, Madaxda Qeybaha iyo Mashaariicda ee...
Madaxweynaha Jubbaland oo furay kalfadhiga 4aad ee maamulkiisa
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta furay kalfadhiga afraad ee golaha wakiilada Dowlad Goboleedka Jubbaland. ...